30 နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူသားသမီးတို့အဘို့ခရစ္စမတ်ဆုလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “30 နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူသားသမီးတို့အဘို့ခရစ္စမတ်ဆုလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 26 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အွန်လိုင်းရှားတဲ့ဘဝကနေဆုချီးမြှင့်ဖို့သူတို့သားသမီးရှာဖွေနေမိဘများအတွက်, မြင်သာထင်သာများများရှိပါတယ်, တီထွင်, ၏နည်းပညာနားလည်တဲ့သားသမီးတို့အဘို့ထိုအရပ်၌ပညာရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေမှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ထုတ် 2015.
သငျသညျမိဘတစ်ဦးအနေပဲဖြစ်ဖြစ်, အုပ်ထိန်း, ဆွေမျိုးသို့မဟုတ်မိသားစုမိတ်ဆွေတစ် - သမျှကိုသင့်စျေးနှုန်းအကွာအဝေး - ကယခုနှစ်နည်းပညာ-related လက်ဆောင်မှကြွလာသောအခါသငျသညျရှေးခယျြမှုအတှကျကိုလုယူနေ. ဤတွင်အကောင်းဆုံးဥပမာတချို့ရှိနေပါတယ်.
အမေဇုံ Fire HD ကိုကလေးတွေက Edition ကို
1. အမေဇုံ Fire HD ကိုကလေးတွေက Edition ကို Tablet ကို (£ 100 က)
သင်တို့၏သားသမီးအဆက်မပြတ်သင့်ရဲ့တက်ဘလက်အပေါ်မိမိတို့လက်ကိုရဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ဖို့သဘောလုပ်တတ်မည်အကြောင်း - သူတို့အသုံးပြုရန်ဘယ်လောက် ပတ်သက်. သင့်လျော်သောစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ, ဟုတ်ပါတယ်. Amazon ရဲ့ကလေး-အာရုံစူးစိုက်တက်ဘလက်ကြည့်ကောင်းစွာရကျိုးနပ်သည်. Amazon ရဲ့မီးသတ်နှင့်အတူ apps များ bundling ကလေးတွေက Unlimited £ 3.99-a-လစာရင်းပေးသွင်းခြင်း - £ 100 အဘို့အသငျသညျပေါက်ကနေကာကွယ်ဖို့ chunky rubberised အမှုနှင့်အတူ nippy device ကိုရ, စာအုပ်များနှင့်ဂိမ်းများ.
• အ Fire HD ကိုကလေးတွေက Edition ကိုအပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
Scratch အသုံးပြုခြင်း Beginners များအတွက် coding.
2. Scratch အသုံးပြုခြင်း Beginners များအတွက် coding (£ 13)
Usborne 1970 နှောင်းပိုင်းကတည်းကပရိုဂရမ်အကြောင်းကိုသားသမီးရဲ့စာအုပ်တွေထုတ်ဝေခဲ့, နှင့်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်ပေးရန်ကြောင့်ဒဏ်ငွေအမွေအနှစ်သို့သေသပ်စွာကိုက်ညီ. အဆိုပါစာအုပ် Scratch အပေါ်အလေးပေး, coding ကလေးတွေကိုမိတ်ဆက်ဖို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကကျောင်းတွေတစ်ဦးတိုးပွားလာအတွက်အသုံးပြုထားကြောင်းင်သောအမြင် programming ကိုပတ်ဝန်းကျင်. ဒါဟာတစ်ဦးလက်လှမ်းနိဒါန်းင်, သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဆန့်မှအချို့သောပျော်စရာစီမံကိန်းများအပေါ်စတင်ခဲ့ရတဲ့ရှေ့တော်၌ထိုအခြေခံအားဖြင့်ကလေးများလမ်းလျှောက်.
• အင်တာဗျူး: code ကိုသွန်သင်သားသမီးအပေါ် Usborne ရဲ့ Lisa ကို Watts
Minecraft Stop-Motion Movie, ဖန်ဆင်းရှင်.
3. Minecraft Stop-Motion Movie, ဖန်ဆင်းရှင် Animation ရဲ့စတူဒီယို (£ 30,)
သားသမီးများ၏သန်းနဲ့ချီတဲ့ Minecraft ကစားကိုချစ်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် Stampy နှင့် The စိန် Minecart တူ YouTubers ကိုကသုံးပြီးဖန်တီးသောအွန်လိုင်းဗီဒီယိုကြည့်. Mattel ကနေဒီကိရိယာအစုံမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက် blocky ပုံပြောခြင်းသို့လေးတွေဖွင့်ဖို့ရည်မှန်း, သော်လည်း. ဒါဟာစီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်ကျားကန်နှင့် Mini-ကိန်းဂဏန်းအက္ခရာအစုတခုဖွင့်, ထို့နောက်သုံးပြီး stop-motion ရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးရန်ပြောင်းရွှေ့ (အခမဲ့) အန်းဒရွိုက်သို့မဟုတ် iOS အတွက်အဖော် app ကို.
ဟေးသငျ့ကိုယျပိုငျ V8 အင်ဂျင် Build.
4. ဟေးသငျ့ကိုယျပိုငျ V8 အင်ဂျင် Build (£ 40)
သူတို့ရဲ့ကားတွေ၏အူသို့ဂုဏျရညျတူလာသောအခါဘယ်နှစ်ယောက်ခေတ်သစ်မိဘများအိမ်မှာအမှန်တကယ်ခံစားရ? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကငါတို့သားမြေးတက်လေ့ကျင့်ဖို့အချိန်င်. ကုမ္ပဏီကမှနာမည်ကြီးကားလက်စွဲနောက်ကွယ်မှဒီကိရိယာအစုံဟာအပြည့်အဝလည်ပတ် V8 ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ကိုဖြစ်ပါသည်, သောကလေးများခြစ်ရာကနေတည်ဆောက်နိုင်. အစစ်အမှန်အရာမှမှတျတမျးတငျထားဖလက်ရှ်မီးပွားပလပ်နှင့်အသံထည့်သွင်းနေကြတယ်.
အဆိုပါ Incredible Intergalactic ခရီးမူလစာမျက်နှာ.
5. အဆိုပါ Incredible Intergalactic ခရီးမူလစာမျက်နှာ (£ 20)
ဒါက gadget ကမဟုတ်ပါဘူး: အဖြစ်ဝေးသင်တို့၏သားသမီးစိုးရိမ်နေကြအဖြစ်, ဒါကြောင့်ပဲပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့. သို့သော်နည်းပညာနောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါသည်. ပဌမ, ဒါကြောင့်သင့်ကလေး၏နာမတျောအားကိုယ်ပိုင်င်သောကြောင့်,, ထုတ်ဝေသူပျောက်ဆုံးသွားသောငါ့နာမရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်ကနေအပေါ်ကိုအောက်ပါ သူ၏ / သူမ၏အမည်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အဘယ်သူသည် Little က Boy / မိန်းကလေး. ဒါပေမဲ့ဒုတိယအ, သင့်ရဲ့လိပ်စာသင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်၏နောက်ဆုံးစာမျက်နှာတစ်ခုကဂြိုလ်တုမြေပုံလုပ်ဖို့အသုံးပြုသည်ကို ထောက်.. သူတို့သဘောပေါက်လာသောအခါသင်တို့၏သားသမီးရဲ့မေးရိုးတစ်စက် Watch.
• အင်တာဗျူး: ငါ့နာမကိုဆုံးရှုံးနေတဲ့ $ 9m ရန်ပုံငွေပုံပြင်ကိုပြောပြ
SAM ကိုသိပ္ပံပြတိုက်တီထွင်သူ Kit.
6. SAM ကိုသိပ္ပံပြတိုက်တီထွင်သူ Kit (£ 100 က)
micro-အီလက်ထရွန်းနစ်ကျောင်းတွေအတော်များများအတွက်တစ်ကျော့ပြန်အောင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူလက်ကို-On ရတဲ့နေဆဲသားသမီးတို့အဘို့ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ်. အဆိုပါသိပ္ပံပြတိုက်ရဲ့တီထွင်သူ Kit ကပိုပြီးလွယ်ကူစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်, ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ကာအဖော် app ကိုမှတဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်အာရုံခံကိရိယာများနှင့်ဉသြသံတစ်သေတ္တာနှင့်အတူ. ငါးစီမံကိန်းများကို, Morse က code ကိုစလှေတျနေတဲ့စည်စက်ကစားရန်, ပါဝင်သည်.
Osmo ရည်ရွယ်သည့် iPad ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည် 5-13 နှစ်ကြားရှိ, တက်ဘလက်အတွက်ရပ်တည်တဲ့စခန်းနှင့်အတူ, နှင့်၎င်း၏ထိပ်တန်းမှအလေးထားတဲ့မှန်မှာ "ကစားလယ်ပြင်" သို့သင့်စားပွဲဖွင့်ဖို့. ဒါကအမြိုးသားတို့ထောက်ပံ့အရေအတွက်သို့မဟုတ်စာတစ်စောင်ကြွပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်, Osmo ရဲ့သင်ယူမှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဂိမ်းကစားရန်အိုင်ပက်များ၏ရှေ့မှောက်၌သစ်သားပဟေဠိအပိုင်းပိုင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရေးဆွဲ. ဒါဟာအနာဂတ်ချဲ့ထွင်ဘို့အလားအလာအများကြီးရှိပါတယ်.
8. စန်းပွကလေးတွေက Coloud နားကြပ် (£ 25)
သင်တို့၏သားသမီး Justin Bieber ကို blasting နေတယ်ဆိုရင်, One Direction အဖွဲ့သို့မဟုတ် တို့၏အညစ်အကြေး၏ပုခက် သငျသညျမှာတေလာဆွစ်ဖ်, ဤအရောင်စုံ Over-နားကိုနားကြပ်ကိုသင့်ခရစ္စမတ်ငြိမ်းချမ်းသောစောင့်ရှောက်ဖို့ပဲအရာဖြစ်စေခြင်းငှါ. သူတို့ကအလင်းပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့တစ်တွေရိုယူနိုင်ကြောင်းတူခံစားရ, နှင့်မိဘများအတွက်အဆွဲဆောင်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့အင်္ဂါရပ် built-in စေခြင်းငှါအသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်သင့်သားတို့သည်မိမိတို့ဂီတ play ဘယ်လိုပဲအသံကျယ်ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်ကြောင်း.
စစ်သည်များ၏ကမ္ဘာ့ဖလား: တစ်ဦးက New သူရဲကောင်း.
9. စစ်သည်များ၏ကမ္ဘာ့ဖလား: တစ်ဦးက New သူရဲကောင်း (£ 7)
နည်းပညာမအပိုင်းအစ, ဒါပေမယ့်အစားမိုဘိုင်းဂိမ်းအပေါ်အခြေခံတဲ့ဝတ္ထု: စစ်သည်များ၏ Candy ရဲ့သမိုင်းပုံစံကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ထဲ, တူညီတဲ့ကုမ္ပဏီ၏ Moshi Monsters တူရာ, ခရစ္စမတ်ကာလ၌ကုန်သွယ်တဲ့အိမ်ရှင်တခုကိုမွေးဖွားစေခဲ့ပါတယ် 2015. ဒါကြောင့်မိုဘိုင်းဂိမ်းကယ့်ကိုဖတ်မှကလေးများအားပေးနိုငျ? တစ်ဦးက New သူရဲကောင်းငါ့အသားနှစ်ယောက် '' ခံစားအပေါ် အခြေခံ., ဟုတ်ကဲ့. ဒါဟာဂိမ်းရဲ့အဓိကသော့ချက်စာလုံးအချို့အကြောင်းကိုတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံပြင်ရဲ့, တစ်ဦးသငျ့လျြောသောဇာတ်လမ်းထက်ပါးလွှာမြှင့်တင်ရေးလှည့်ဖျား-ချွတ်တူခံစားသော.
• အင်တာဗျူး: စိတ်ကို Candy ဆွေးနွေးပွဲစစ်သည်များ၏ကမ္ဘာ့ဖလား
10. Tiggly စကား (£ 25)
နောက်ထပ်တက်ဘလက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ဤလူငယ်ကလေးများအတွက်အချိန် - နှင့် Android tablet များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အိုင်ပက်. သင်သည်အဘယ်သို့သင်၏အဘို့အရ 25 ငါးရအက္ခရာ - - တက်ဘလက် Touchscreen ပေါ်မှာနေရာချသောအခါအ Tiggly ရဲ့ apps များကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Quid ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာလုံးအစုတခုဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကိုအပလီကေးရှင်း - Tiggly ဆရာဝန်, Tiggly အတ္ထုပ္ပတ္တိသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို, Tiggly ရေငုပ်သင်္ဘောများနှင့်သစ်နှမ်းလမ်းဗျည်းအက္ခရာမီးဖိုချောင်စာဖတ်ခြင်း - အခမဲ့, သားသမီး phonics လေ့ကျင့်ကိုကူညီဖို့စာလုံးတွေသုံးပြီး, ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့်စကားလုံးအဆောက်အဦကျွမ်းကျင်မှု, အခြားသူများအကြား.
11. ကြယ်များကြည့် Lottie (£ 20)
"အစမတ်" Barbie တစ်ဦးလွဲချော် Doll ပေးခြင်း privacy ကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်? ကြယ်များကြည့် Lottie စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်စေခြင်းငှါ. အဆိုပါဇာတ်ကောင်ညအချိန်ကြယ်များကြည့်ဘို့သူမ၏ကိုယ်ပိုင်တယ်လီစကုပ်နဲ့အသငျ့တျော-နွေးထွေးသောအဝတ်အစားနဲ့နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်. ပိုပြီးင်အဘယျသို့, သူမ၏ထုတ်လုပ်သူဥရောပအာကာသအေဂျင်စီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်, အထက်မိုဃ်းတိမ်အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာတွေ့မှကလေးများအားပေးဖို့တစ်ဦးအဖော် website ကိုလွှင့်တင်ခဲ့သည့်.
12. Marbotic စမတ်ပေးစာ (£ 50 ဦး)
တက်ဘလက်နှင့်အသုံးပြုခံရဖို့ဒီဇိုင်းကပိုအက္ခရာများ - သာဤကိစ္စတွင်အတွက်အိုင်ပက်, Marbotic touchscreen က-မှတ်မိသစ်သားစာလုံးများကိုတစ်ခုလုံးကိုအက်ခရာရဲ့တန်ဖိုးရှိထောက်ပံ့အတူ - ယခုအဘို့. တစ်ဦးက Kickstarter ပေမယ့စီမံကိန်းကိုအဖြစ်ကစပြီးဘဝ, သူတို့ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်အတွက်ရောင်းချခြင်းအပေါ်သွားသည့်အခါမတ်ပေးစာနှစ်ခုအဖော် apps များရှိသည်လိမ့်မယ် - Alphamonster နှင့် Vocabubble - ပိုပြီးအတွက်အောက်ပါနှင့်အတူ 2016. သစ်သားအက္ခရာပဟေဠိအပေါ်တစ်ဦးကသပ်သပ်ရပ်ရပ်ခေတ်သစ်လှည့်ကွက်.
Touch ကိုဘုတ်အဖွဲ့ကစတင် Kit.
13. Touch ကိုဘုတ်အဖွဲ့ကစတင် Kit (£ 95)
ဒီကိရိယာအစုံနှင့်ပိုမို Micro-အီလက်ထရွန်းနစ်, သောအစဉ်အလာ papercraft နှင့်အတူဝါယာကြိုးများနှင့်မိကျောင်းကလစ်များ blends - စတစ်ကာများ, cutouts နှင့်ဖယောင်းစက္ကူသေတ္တာထဲတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်. အဆိုပါ core ကိုအမှန်တကယ်ထိဘုတ်အဖွဲ့သည်: အတူတစ်ချိတ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာ 12 လျှပ်, အာရုံခံကိရိယာသို့သူတို့ကိုငါဖွင့်ဖို့အခြားပစ္စည်းများမှပေါ်ခြယ်သနိုင်ပါတယ်အကငျြ့ဆေးသုတ် - သော "လျှပ်စစ်ဆေးသုတ်" ကိုအသုံးပြုပြီးချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်. သုံးစီမံကိန်း box ထဲမှာအကြံပြုကြသည်, အတူ ပိုပြီးလှုံ့ဆော်မှု တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်.
မင်္ဂလာပါပတ္တမြား: Coding ထဲမှာ Adventures ကို.
14. မင်္ဂလာပါပတ္တမြား: Coding ထဲမှာ Adventures ကို (£ 11)
ရောနှောယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှာရည်ရွယ်, မင်္ဂလာပါပတ္တမြားဖင်လန်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူလင်ဒါ Liukas ၏တီထွင်တာဖြစ်ပါတယ်, အဘယ်သူသည် Kickstarter ကအပေါ် $ 380k ထမြောက်စေတော် တွင် 2014 ကလေးတွေကိုပရိုဂရမ်းမင်း၏အခြေခံဆုံးမဩဝါဒပေးသူမ၏စာအုပ်ပေမယ့်. ပတ္တမြားစာအုပ်၏ကြယ်ပွင့်သည်, တဝက်ပုံပြင်တဝက်နိုင်တဲ့ coding-related လှုပ်ရှားမှုများရာဖြစ်ပါသည်. အဲဒီအစားထက်တိကျတဲ့ဘာသာစကားသင်ပေး, ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာစဉ်းစားတွေးခေါ်အပေါ်အလေးပေး: ခြေလှမ်းများသို့တာဝန်များကိုကိုဖြို, အစက်စက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ပုံစံများနှင့်ပိုပြီး.
• အင်တာဗျူး: မင်္ဂလာပါပတ္တမြားများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုအပေါ်လင်ဒါ Liukas
15. Toca စက္ကူသတ်တဝါ (£ 20)
Toca Boca ဆုံးတီထွင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ကမ်ဘာပျေါတှငျဖန်တီးမှုသားသမီးရဲ့ app ကို developer များ, ၎င်း၏ဇာတ်ဆောင်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကလေးတွေ၏ဝမ်းသာသန်းပေါင်းများစွာရှိခြင်းနှင့်အတူ. Toca စက္ကူသတ်တဝါ app တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး, သော်လည်း: ဒါကြောင့်ကဒ်ကိုမှဖန်ဆင်းတော်ရောင်စုံ critter အစိတ်အပိုင်းများတစ်ဦး "ပြဇာတ်အစု" ရဲ့, မိမိတို့ဇာတ်ကောင်လုပ်လိုသို့သော်ကလေးများအတူတကွလို့ရပါတယ်သော.
• အင်တာဗျူး: အွန်လိုင်းဗီဒီယိုသို့ရဖို့ Toca Boca ရဲ့အစီအစဉ်
da Vinci အငယ်တန်း 3D ပရင်တာ.
16. da Vinci အငယ်တန်း 3D ပရင်တာ (£ 300)
ဒါကို, 3၎င်းတို့၏ဘတ်ဂျက်အတွင်းပါစေတယောက်တည်း - -: D ပရင်တာများခရစ်စမတ်၏စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးမှာအများဆုံးမိဘများအတွက်တင်ဆက်မဖြစ်စေခြင်းငှါဒါပေမဲ့သူတို့သားသမီးရှေ့လူအစုအဝေး၏နည်းပညာအပေါ်ချွတ်စေလိုသောသူတို့အဘို့, အ Da Vinci Jr ကတစ်ဦးပါထိုက်သည်. ဒါဟာပိုမိုရှုပ်ထွေးမော်ဒယ်တွေရဲ့စံကိုက်ညှိခြင်းဝေဒနာမှရှောင်ရှားရန်ကတိပေးထား, နှင့်ကလေးများပုံနှိပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ 3D ဒီဇိုင်းများကိုရှာဖွေဘို့က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းရှိပါတယ်.
ဗြိတိန်နိုင်ငံ startup Kano အခြားကုမ္ပဏီကလေးများကွန်ပျူတာဖို့ကြိုးစားနေသည် - နှင့်ဤအမှု၌, သူတို့ကကွန်ပျူတာကိုမိမိတို့တည်ဆောက်. ၎င်း၏စက်ကိုနောက်ဆုံးပေါ် Raspberry Pi ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခြေခံထားသည်, ဂီတအောင်သားသမီးရရန်တောက်တောက်လိမ္မော်ရောင်ကီးဘုတ်နှင့်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့လုပ်ခဲ့ပြီး, programming နဲ့ပင် Minecraft နှင့်အတူအကြောင်းကို fiddling. ဒါ့အပြင်သစ်ကို: တစ်ဦး £ 110 "screen ကို kit" ကလေးများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ခရီးဆောင် display ကိုတည်ဆောက်ရန်အဘို့အ.
• ဆန်းစစ်ခြင်း: အဘယျသို့ကသင့်ကလေးတွေနှင့်အတူ Kano ကွန်ပျူတာအောင်တူရဲ့
18. EE ရော်ဘင်တက်ဘလက် (£ 30, + လစဉ်စာချုပ်)
Amazon ရဲ့ Fire HD ကိုကလေးတွေက Edition ကိုတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာ (သို့မဟုတ်လွန်-အပေါ်အိုင်ပက်) မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ EE ရဲ့ရော်ဘင်ဖြစ်ပါသည်, သောအောက်တိုဘာလတွင်စတင်. ဒါဟာ app များနှင့်အတူကြိုတင်လာသည့်အန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်င်, ဂိမ်းနှင့် e-book, အဖြစ်အခမဲ့အသုံးပြုခွင့် (အလွန်ကောင်းမွန်သော) Hopster ဝန်ဆောင်မှု, သောတီဗီ streaming စုအဝေးကိုပညာရေးဆိုင်ရာ Mini-ဂိမ်းနှင့်အတူပြသထားတယ်. မိဘထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဝဘ် filtering ကို system ကိုလည်းထည့်သွင်းနေကြတယ်.
19. Stampy ရဲ့နေချင်စဖွယ်စာအုပ် (£ 8)
သငျသညျ Minecraft နှင့် YouTube ချစ်သောသူသားသမီးရှိပါက, သငျသညျပြီးသားအားလုံး Stampy အကြောင်းသိပါလိမ့်မယ် - ခေါ်ဗြိတိန်နိုင်ငံ YouTuber တယောသပ်သည် Garrett. ထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်ပြီးလျှင် 6.6 မိမိအရုပ်သံလိုင်းမှသန်း subscribers, ယခုနှစ်သူထုတ်ဝေသူအဂ္ဂမွန့်နဲ့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစာအုပ်ဖြန့်ချိ. ဒါဟာကာတွန်းအရောအနှောင့်, ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, Stampy နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများအကြောင်းအချက်များ, နှင့်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ကူးတွေ - ပေါင်းတစ်ကိတ်မုန့်စာရွက် - မိမိငယ်ရွယ်ပရိတ်သတ်တွေများအတွက်ကိုးကားများများနှင့်အတူတွေ့ရ. ့ငွေသား-in ကိုနှစ်စဉ်ထက်ပို.
• အင်တာဗျူး: Minecraft မှစာအုပ်များမှ, Stampy လာမည့်ခဲ့တယျ
dot နှင့် Dash.
20. dot နှင့် Dash coding စက်ရုပ် (£ 130)
ကလေးတွေပိုနိုင်တဲ့ coding - အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆောင်ပုဒ် 2015 - ဤအချိန် မှလွဲ. rotund စက်ရုပ်တစ်စုံကိုကူညီရှိပါတယ်. dot တစ် webcam တူကြောင်းညာဘက်အပေါ်စာရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, Dash က၎င်း၏ပိုကြီးအဖော်နေစဉ်, အခန်းပတ်ပတ်လည်ကိုလှိမ့်နိုင်စွမ်း. နှစ်ဦးစလုံးအတူတူသူတို့ရဲ့အဖော် apps များအတွက် Code များလုပ်ကွက်တွဲကထိန်းချုပ်ထားကြသည်, ပထမဦးဆုံးကျွမ်းကျင်မှု programming သားသမီးသင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားသော.
• စက်ရုပ် Dot programmable နှင့် code ကိုရန်သင့်ကလေးတွေကိုသင်ပေး Dash နိုင်သလား?
ကလေးတွေကအဘို့အ Techair က Universal Tablet ကိုဖြစ်ရပ်မှန်.
21. ကလေးတွေကအဘို့အ Techair က Universal Tablet ကိုဖြစ်ရပ်မှန် (£ 25)
သင်တို့၏သားသမီးအသုံးပြုနေသည်မည်သို့ပင်တက်ဘလက် - ကောင်းစွာ, အဖြစ်ကြာမြင့်စွာက 10.1 လက်မတယောက်ရဲ့အဖြစ်, တစ်ခုနစ်လက်မဗားရှင်းပေမယ့်လည်းမရရှိနိုင်ပါသည် - ဤကိစ္စတွင်ကကာကွယ်ဘို့တာအကောင်းဆုံးအိုင်ဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. မယ့် device ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာကျဆင်းသွားလျှင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောနေ့ရက်မျက်နှာပြင်-အက်ကွဲနေသင်တို့ကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်ကွောငျ့,. ဒီမှာရောင်းအမှတ်ကိစ္စတွင်၏ပြင်ပသုတ်-သန့်ရှင်းသောသူသည်, သားသမီးတို့သည်အမှုအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကောက်ကြောင်းသရုပ်ပုံဖော်ခြင်း scribble သူတို့နှင့်အရောင်ရန်အဘို့အထောက်ပံ့ရေချိုးနိုင်သောခြံနှင့်အတူ.
Raspberry Pi2မော်ဒယ်ခ.
22. Raspberry Pi2မော်ဒယ်ခ (£ 26)
အ Kano ကွန်ပျူတာ၏အဓိကအယူခံကြောင့်ကလေးများမှ Raspberry Pi နည်းနည်းပိုပြီးလွယ်ကူစေသည်ဖြစ်ပါသည်. သို့သော် အကယ်. သူတို့ (သို့မဟုတ်သင်) ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချကြသည်, သငျသညျဖြောင့်ကုန်ကြမ်းသွားနောက်ဆုံးပေါ် Pi ကိုကွန်ပျူတာဘုတ်အဖွဲ့ကိုဝယ်ချင်စေခြင်းငှါ. ဒါဟာယခင်မော်ဒယ်ထက်ခြောက်ဆပိုမြန်မယ့်, နှင့် Windows ကိုထောက်ခံနိုင်စွမ်း 10 operating system ကို Linux ကိုသင့်ရဲ့အရာမပါလျှင်. သင်တစ်ဦး screen နဲ့ကီးဘုတ်လိုအခြားကိရိယာများကိုဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ခြစ်ရာကနေအတူတူတစ် Pi ကို-based system ကိုချပြီးတစ်ကယ့်ကိုပျော်စရာပူးတွဲစီမံကိန်းကိုရှိနိုင်ပါသည်.
Minecraft-အရူးသားသမီးတို့အဘို့တစ်ခုမှာပိုပြီးဆုလက်ဆောင်: ဒီက desktop ကွန်ပျူတာထက် console ကိုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်း device ကိုအပေါ် Mojang ရဲ့ဂိမ်းကစားသူတွေကိုအဘို့ဖြစ်၏. Gameband တစ်ဝတ်ဆင်တီးဝိုင်းဖြစ်ပါသည်, USB ကနေတဆင့်ကိုပလပ်အခါ,, သားသမီးရဲ့ Minecraft ကမ္ဘာအထိထောက်ခံ, ဒါကြောင့်သူတို့ကမိတ်ဆွေတွေ '' အိမ်များမှာကစားရန်သူတို့ကိုယူနိုင်ပါသည်. အနည်းငယ်ကမ္ဘာကြိုတင်တင်ထားလာ, နှင့် device ဟာ pixel လက်ပတ်နာရီအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ် - ၎င်း၏ display ကိုစိတ်ကြိုက်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပြီးပြည့်စုံ.
DIY လျှပ်စစ်စွမ်းအားမုန့်စိမ်း Kit.
24. DIY Electro မုန့်စိမ်း Kit (£ 15)
အမှန်တရားမှာ, အံ့ဖွယ်အပေါ်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း နည်းပညာကြှနျုပျတို့ကိုကယျတငျတျောမူပါလိမ့်မည် website ကခရစ္စမတ်လက်ဆောင်အဘို့သင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်. သို့သော်ထိုသို့အများဆုံးစွဲမက်စေခြင်းငှါအ DIY Electro မုန့်စိမ်း Kit င်: ဒါကြောင့်အလင်းအိမ်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုင်, Play စ-ဒိုသို့ရသည်ဟုခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ switches များနှင့်ဉသြသံ (သငျသညျအိမျမှာသင်တို့၏သားသမီးနှင့်ဖွဲ့ပါတယ်ကြောင်းသို့မဟုတ်မုန့်စိမ်း) နှင့် squidgy - - အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ရောင်စုံကိုဖန်တီးရန်. အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်စေရန်အဘယျအဘို့အစိတ်ကူးများများများကမ်းလှမ်း, လှုံ့ဆော်မှုချို့တဲ့လျှင်.
Meccano Meccanoid G15 KS စက်ရုပ်.
25. Meccano Meccanoid G15 KS စက်ရုပ် (£ 170)
ဟုတ်ကဲ့, ဒါကြောင့်စျေးကြီးင်. ဟုတ်ကဲ့, ကထက်ပိုပြီးရှိပါတယ် - ကဖွယ်ရှိသည်အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုခရစ္စမတ်နံနက်တက်စို့ဦးမည်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း 1,100 အပိုင်းပိုင်း. သို့သော် Meccano ရဲ့ humanoid(ish) စက်ရုပ်လူငယ်ထုတ်လုပ်သူများအဘို့စက်ရုပ်သို့တောက်ပသောလမ်းအဖြစ် Lego မှရဲ့ Mindstorms EV3 bot ကိုအတူရှိတက်သည်. ဒီ roundup အတွက်အခြား devices များနှင့်အတူအမျှ, အ G15 ကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့အဖော် app ကိုအဲဒီမှာဖွင့်, ကလေးများလည်းမိန့်ခွန်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်သင်ပေးနိုင်ပေမဲ့.
ညဥ့်အခါ Zookeeper နှင့်ထောက်လှမ်းရေးသစ်ကုလားအုပ်တစ်ကောင်.
26. ညဥ့်အခါ Zookeeper နှင့်ထောက်လှမ်းရေးသစ်ကုလားအုပ်တစ်ကောင် (£ 7)
နောက်ထပ် traditonal ပုံနှိပ်စာအုပ်, ဒါပေမဲ့နောက်တဖန်, ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကတခုကိုမွေးဖွားစေခဲ့ပါတယ်. ဒီကိစ္စမှာ, ဒါကြောင့်ည Zookeeper င်, ကလေးများတက်အိပ်မက်မက်နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မှော်တိရိစ္ဆာန်များဆွဲရှိရာအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်း, စာဖတ်ခြင်းစဉ် (နှင့်ဖန်တီးခြင်း) ပုံပြင်များနှင့်၎င်းတို့၏တိရစ္ဆာန်ရုံခုခံကာကွယ်ဖို့ဂိမ်းကစားခြင်း. အခုတော့ထိုအရပ်၌ကမ္ဘာအပေါ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်စာအုပ်ရဲ့နှင့်၎င်း၏သတ္တဝါများ, ထောက်လှမ်းရေးသစ်ကုလားအုတ်နှင့်တစ်ဦးအချိန်-ခရီးသွားလာဆင်နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံ. ဤသည်ကိုငါဖမ်းမိသောပထမဦးဆုံးစာအုပ်တွေတ (ယခင်ကတွန့်ဆုတ်-စာဖတ်သူကို) အလင်းအိမ်ထွက်ပြီးနောက်မိမိကိုမိမိအားဖြင့်စာဖတ်ခြင်းသည်ခြောက်နှစ်အရွယ်သား - အမှန်ပင်မြင့်မားကိုခြီးမှမျး.
• အင်တာဗျူး: ညဥ့်အခါ Zookeeper လေးတွေအသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်လမ်းနှင့်ကစားကမ်းလှမ်း
Ozobot Bit သာ.
27. Ozobot Bit သာ (£ 50 ဦး)
humanoids မေ့လျော့တော်: ဒီအိတ်အရွယ်စက်ရုပ်တစ်ဦးအဟောင်းကျောင်း Apple က iMac mouse ကိုပိုပြီးဆင်တူသည်. ဒါဟာသော်လည်း Smart များများတပ်ဆင်ထား: စာရွက်ပေါ်တွင်အရောင်များ၏လိုင်းများနှင့်လုပ်ကွက်ဆွဲအားဖြင့်ကလေးများ "အစီအစဉ်" device ကို, ၎င်း၏ OxoBlockly programming ကို tool ကိုအားဖြင့်ပညတ်တို့ကိုဘာသာပြန်ဆိုထားသည့်. Android နှင့် iOS အတွက်အဆိုပါ Ozobot အဖော် app များကိုစက်ရုပ်ထဲကအများဆုံးရရန်မည်သို့သားသမီးသွန်သင်မည်.
28. ပြွန်သူရဲကောင်းများ DanTDM သူရဲကောင်း Pack ကို (£ 15)
ဘယ်လိုအရေးယူကိန်းဂဏန်းများတစ်နည်းပညာထောင့်ရှိနိုင်ပါသည်? သူတို့နာမည်ကြီး YouTube ပေါ်မှာအခြေစိုက်နေရတဲ့အခါ, ဟုတ်ပါတယ်. ဗြိတိန်နိုင်ငံက စား. ဒံယလေက "ဒီစိန် Minecart" Middleton ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးလိုင်းများအတွက်တယောက်ရှိပါတယ် 2015 မိမိအ Minecraft Adventures မှကျေးဇူးတင်စကား. သူလည်းတစ်ဦး "Tube သူရဲကောင်းများ" action ကိုကိန်းဂဏန်းသို့လှည့်ခံရဖို့ကိုပထမဦးဆုံးကြယ်တ, မိမိအဝံပုလွေဖှယျနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံ. စီးရီးအတွက်အခြားသူများက CaptainSparklez ပါဝင်, က Sky နှင့် Tobuscus - ငယ်ရွယ် Minecraft ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးကိုအကျွမ်းတဝင်အမည်များ.
• ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: အဆိုပါစိန် Minecart လူကြိုက်အများဆုံး YouTuber တဖြစ်လာ
Ravensburger သိပ္ပံ X ကို Electronics နှင့် Circuitry
29. Ravensburger သိပ္ပံ X ကို Electronics နှင့် Circuitry (£ 30,)
ပိုများသော Micro-အီလက်ထရွန်းနစ်, စစ္နှင့်အတူသားသမီးလက်ကို-အပေါ်ရရှိရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းလှည့်ကွက်တစ်ခုကောင်းစွာထုတ်ထင် box ထဲမှာ, resistors, capacitors နှင့်ဝါယာကြိုးများ. အဆိုပါအာရုံစိုက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများတည်ဆောက်လေးတွေအပေါ်ဖြစ်ပါသည်, အလင်းအိမ်နှင့်နှိုးစက်မှမိမိတို့ဂီတများအတွက်အသံချဲ့စက်မှ. အားလုံးရှစ်စီမံကိန်းများကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်အဘို့အလှုံ့ဆော်မှုများများပြီးနောက်.
ငါသည်ငါ၏ Little ကမျက်လုံးနှင့်အတူစူးစမ်း: ငါ့ကိုတွင်အမှုအရာဒါကသူလျှို.
30. ငါသည်ငါ၏ Little ကမျက်လုံးနှင့်အတူစူးစမ်း: ငါ့ကိုအမှုအရာဒါကသူလျှို (£ 0.01)
အနည်းငယ်အဟောင်းတွေလေးတွေဘို့တ. ဒါဟာသင်တို့၏သားသမီးသင်တစ်ဦးတစ်ပြားမှကုန်ကျတဲ့ပစ္စုပ္ပန်ပေးဖို့စျေးပေါနှင့်အတန်ငယ် churlish ထင်ရနိုင်ပြီးလီယံသွေးဆောင်ခြင်းငှါ. ဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ချိန်ချိန်လေ့လာသင်ယူရန်ရှိသည် (လီယံအဘို့အကြောင်းပြချက်နှင့် ပတ်သက်., မစျေးပေါနှင့် churlishness အကြောင်း - လည်းကပေမဲ့). နည်းပညာကုမ္ပဏီထံမှဤစာအုပ်အကြှနျုပျ၏မြည်းကို "အသေးစိတျကိုဝှက်ထား 27 သူတို့ရဲ့ပညာအတတ်မရှိဘဲသို့ hacked သို့မဟုတ်လူအပေါ်စူးစမ်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းအင်တာနက်ချိတ်ဆက်အိမ်သူအိမ်သားထုတ်ကုန်များနှင့်ကရိယာ ". မင်္ဂလာခရစ္စမတ်…
ဒါကင် 30 အဘို့အစိတ်ကူးများ သင့်ရဲ့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်, ငါတို့မူကားအဘယျသို့လွဲချော်ရပြီ? အဆိုပါမှတ်ချက်တွေအပိုင်းသားသမီးတို့အဘို့နည်းပညာ-related လက်ဆောင်သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များအဘို့အဖွင့်.
55560	0 3: D ပုံနှိပ်ခြင်း, Amazon.com, အပိုဒ်, စာအုပ်များ, သားသမီးရဲ့နည်းပညာ, ခရစ္စမတ်, computing, အင်္ဂါရပ်များ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Minecraft, programming, စက်ရုပ်, သိပ္ပံ, စျေးဝယ်ခရီးစဉ်, Star Wars, စတူးဝပ်သောင်, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ, YouTube ကို
← Beeline စက်ဘီးစီးအညွှန်း device ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: စူးစမ်းရှာဖွေသူများအဘို့အစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ပျော်စရာ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုဆေးခြောက် Smoking ဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြောအမျှင်ကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါ →